ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: အိုဆာကာ မြို့နယ်အဆင့် ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေရေး ဘတ်ဂျက်..???????
အိုဆာကာ မြို့နယ်အဆင့် ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်စိမ်းလမ်းစိုပြေရေး ဘတ်ဂျက်..???????
ဒီနေ့ သတင်းတစ်ခု ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။ စစခြင်းတော့ဒီလူတွေ ဒီကိစ္စလောက်ကို အရေးတကြီး လုပ်နေတယ်ပေါ့။ ရေအဆုံးကုန်းတစ်ဝက်ပဲ လို့တောင် ရေရွတ်မှိလိုက်တယ်။….
အိုဆာကာ ခရိုင်ထဲကမှ မြို့နယ်အဆင့် စည်ပင်သာယာရဲ့ စိမ်းလမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး ဌာနရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ချယ်ရီတွေ ပွင့်ချိန်ဆိုမြစ်ကမ်း နှစ်ဘက်လုံးမှာ ချယ်ရီတွေ ကအတန်းလိုက်သိတ်လှတယ်။ အဲ့တုန်းကတည်းက အမှိုက်ဆယ်တဲ့ စက်လှေလေးတွေ နဲ့ ရေလည်ခေါင်မှာ သန့်ှရှင်းရေးလုပ်နေတာ တွေ့ဘူးတယ်။ လှေပေါ်မှာ တာယာတွေ ရော ဖော့ဗူးတွေ အများကြီး ကိုယ်တောင်အံ့သြတာအဲ့တုန်းက။
အခုလည်း အဲ့စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ အမှိုက်လိုက်ပြီးဆယ်တဲ့ လှေပေါ်မှာပဲ လျှို့ဝှက်ကင်မရာတတ်ထားသလားတော့ မသိဘူး ၀န်ထမ်းတွေ က ရေထဲကနေဆယ်လို့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ အင်္ကျီတွေထဲက cash တွေ credit card တွေကို ဌာနကိုမအပ်ပဲ သူတို့ခွဲဝေယူ(ဖျောင်)ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကင်မရာမှာ ပေါ်တဲ့အထုပ်ဆိုရင် ငွေက ယန်း သိန်းနဲ့ချီမယ်။ အတော်များများကတော့ ဒီမှာပျောက်ရင်လည်း
ဒါကလည်း ပစ္စည်းပေါ်တော့မူတည်မှာ ပေါ့လေ။ iPhone လောက်ကတော့ ရဲစခန်းမှာသွားမေးပြန်တွေ့တာများတယ်။
မြို့နယ်အလိုက် lost and found Home page လေးတွေကနေတောင် ပစ္စည်းတွေ ကိုကြော်ငြာပေးထားတယ်။ အခုဟာကတော့ ရေထဲကနေဆိုတော့လည်း အင်း…..
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ အနည်းဆုံးတော့ ကျန်းမာရေးအာမခံကဒ်ကတော့ပါမှာပဲ။ လိပ်စာကနေ လိုက်လို့ လည်းရပါတယ်။ ရှားပါးနေကြတဲ့ ခေတ်မှာ ဆိုတော့လည်း ကြည့်ပါလား ခုကြည်ကြည်တောင် အဲ့လိုတွေးသေးတာကိုး လို့ ။
နောက်တစ်ခု ကင်မရာကနေရိုက်ထားတာက အပြင်ကနေ စုပြီးသယ်လာတဲ့ တာယာအဟောင်းတွေ
အမှိုက်တွေ ကိုမြစ်ထဲကို အရင်ကျဲချ ပြီးတော့ မှ ဘာမှမရှိသန့်ရှင်းနေတဲ့ ရေပြင်ကနေအမှိုက်ကို ပြန်ဆယ် တဲ့ ပုံတွေပါ ပါလာတယ်။
အဆိုးဆုံးက မိမိအမှိုက် မိမိပြန်သယ်သွားရအောင်ဆိုတဲ့ ကမ်ပိန်း ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ သူကိုယ်တိုင်က ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက ကဒ်တွေကို ကစားနေတဲ့ပုံ့။
သတင်းဌာနကဗျူးထားတဲ့ ၀န်ထမ်းက(မျက်နှာကိုတော့ ဖျက်ထားတယ်သတင်းမှာ)
မြို့နယ်အနေနဲ့ ကလည်း အမှိုက်မရှိရင် သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆက်ရပ်တည်မလည်းတဲ့။ ဒီဌာန ကို ခရိုင်ကနေကျတဲ့ ဘတ်ဂျက် က ဒီလောက်ပါဆိုတော့မှ ကိုယ်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။
ဒါတောင်သူတို့ က ဒီနှစ်ကိုတိုးပြီးတင်ထားပါတယ်တဲ့။
ခရိုင်အဆင့်ကလူကြီးကလည်း သတင်းသမားတွေက ဗျူးတော့ ဒီလူတွေ ပြည်သူဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ရမှာ သိပ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်။ အမှိုက်သိ်မ်းဌာနအတွက် ခရိုင်ကနေရတဲ့ ဘတ်ဂျက်က တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေနဲ့ (ခုငွေဈေး) ဆိုရင် သိန်း၂သောင်းပါ။
အင်း……..ဆိုပြီးသက်ပြင်းရှည်သာချလိုက်တော့တယ်။ တို့ရွှေပြည်မှာလည်း ဘာလို့ အမှိ်ုက်ကား မလာလည်းတော့ ဘလော့ ဖတ်မှိတဲ့သူပဲဖြေသွားပေးကြတော့။ကိန်းဂဏန်းကလည်း ကွာမှာပါလေ။
Posted by ကြည်ကြည် at 5:35 AM
သားထူး November 4, 2010 at 12:00 PM
ဒီလူတွေ အတော်ညံ့တယ်ဗျာ အောင်သိန်းလင်းဆီမှာ ပညာလာသင်ခိုင်းလိုက်
သားထူး November 4, 2010 at 12:04 PM
ထပ်ပြီး မန့်လိုက်အုံးမယ်ဗျာ ကော်နယ်ရှင်က မကောင်းရတဲ့ အထဲ မကြည်က ကော်မန့်မှာတောင် အဆင့်တွေ အများကြီး လုပ်ခိုင်းထားတော့
မန့်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဗျာ့ ၊ အဆင်ပြေမယ်ဆို ပြန်ပြီးပြင်လိုက်ပါလားဗျာ့ ။
ကျွန်မ နှင့်ခရီး (ကြာခဲ့ပြီ Auckland ဆီသို့)
အတွေးတို့ က ဘလော့ရေးဖို့ သာ
အိုဆာကာ မြို့နယ်အဆင့် ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်စိမ်းလမ်း...